माईतीघरमा गोविन्द केसीले मुखमा टेप लाएर,हातमा प्लेकार्ड बोकेर राखे यस्ता ६ बुँदे माग ! || सुनौलो नेपाल
माईतीघरमा गोविन्द केसीले मुखमा टेप लाएर,हातमा प्लेकार्ड बोकेर राखे यस्ता ६ बुँदे माग !
सरकारले माइतीर मण्डला क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तर, शनिबार चिकित्सा शिक्षाका अभियान्ता डा गोविन्द केसीले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
शनिबार मध्यान्न १२ बजे डा केसी उनका सहयोगीसँगै माइतीघरमा पुगेका हुन्। डा केसीको मुखमा टेप टाँसिएको थियो भने हातमा दुई वटा प्लेकार्ड बोकेका थिए। उनले बोकेको प्लेकार्डमा एउटामा ‘म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुँ’ र अर्कोमा ‘नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिँदैनौं। निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं’ लेखिएको थियो।
केही समयको प्रदर्शनपछि उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनताले आवाज उठाउन पाउँछन्। माइतीघर जनताको साझा स्थान भएकाले यहाँ लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेको हुँ।’ उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र वेथितीवरुद्ध निरन्तर लडिरहने बताए।
‘मैले मेरा मागहरु अगाडि सारेको छु,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने र आवाज उठाउन पाउने अधिकार खोस्न खाजिएको छ। त्यसकारण अब म यहीँबाट आवाज उठाउने छु। न्यायका पक्षमा लड्ने छु।’
डा केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका ४३ जनालार्इ कारबाही गर्नुपर्ने, माइतीघरको निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेर आज मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्।